CENI sy ny fikafikany
2011-08-16 @ 09:34 in Politika
Miarahaba ny rehetra indray rehefa tsy nanoratra ho anareo nandritra ny fotoana maharitraritra. Ny eritreritra no mandeha be fa ny tena no kamokamo, rehefa ny eritreritra iray anefa no tsy voasoratra dia toy ny hevitra iray very maina ihany koa izany. Izay sisa tadidy sisa no tsimponina ho anareo.
Tsy hiresaka momba an-dRavalomanana Marc sy ny SADC aho aloha, na dia ireo ihany indray aza no ambetin-tenin'ny gazety rehetra nivoaka teto Antananarivo androany 16 Aogositra 2011, ary tsorina fa vao maika mampalaza ilay rangahy nialokaloka atsy Afrika Atsimo sy ny fiandrasan'ny olona "sasany" azy higadona eto amin'ny firenena indray. Hiresaka andry iray eto amin'ny firenena heverina fa ho antoky ny demokrasia sy ny fifandimbiasam-pitondrana araka ny safidin'ny vahoaka kosa aho na dia mbola misy aza ny mandà ny olona mandrafitra io andry iray io. Ny CENI eto Madagasikara no ambarako etoana.
Tamin'ny herinandro lasa teo dia nisy ny filazana fa nisy nisompatra ny vohikalan'ny CENI eto Madagasikara ka nofafany tao ny antontan-kevitra fototra ahitana ny momba ny mpifidy eto Madagasikara. Efa mahavariana raha andro vitsivitsy monja taoriany nidirany an-tserasera dia voasompatra sahady io vohikala io. Misy fanamarihana vitsivitsy azoko ambara ihany momba azy io.
Voalohany, raha niditra tao ny tena nijery ny anarana sy ny biraom-pifidianana, fony mbola tsy nisy ilay lazaina fa fisomparana, dia misy ny faritra heverina ho mandeha soa aman-tsara nefa tsy namoaka na inona na inona. Lazaina ho azo itadiavana anarana ny faritra, tanàna ary fokontany nefa dia tsy mamoaka na inona na inona mihitsy ireo. Eo izany dia efa hita ny tsy fahatomombanana. Raha tsy mikitika ireo aho fa mameno ny momba ahy dia mivoaka soa amantsara ny toerana hifidianako izay manamarika fa nampiasaina tokoa ilay taratasy nisoratana anarana farany.
Faharoa, rehefa nampidirina indray ny anaran'ny vadiko dia lasa any amin'ny fokontany nipetrahany taloha indray no mbola isoratany anarana raha hifidy izy. Ny mahavariana dia izao: Fony niara-nifindra ka nikarakara ny taratasy fifidrana izahay dia izaho no nikarakara izany tao amin'ny fokontany. Efa nalaina taminay ny karatry ny mpifidy tany amin'ny fokontany nisy anay avy taloha.Rehefa tonga indray ny taratasy fanisana ahalalana izay efa ampy taona hifidy dia mbola izaho ihany no nameno io taratasy io. Rehefa nohamarinina indray anefa ny misy azy raha hifidy izy dia mbola ilay fokontany nisy azy taloha ihany no hoe isoratany. Tsy nampiasaina indray ve ilay taratasy fanisana farany? Eo no tena mahavariana!
Fahatelo, efa nivoaka indray ny filazana eto fa nisy nisompatra ny vohikala, Notadiavina avokoa indray ny momba ireo olona hafa rehetra te-hijery ny anarany dia tsy nisy nivoaka na tsy nisy na inona na inona nivoaka afa-tsy hoe tsy nisoratra anarana ianao (amin'ny teny frantsay). Niverenako nojerena indray ny anarako fa mbola nivoaka soa aman-tsara ihany ilay efa hitako taloha. Ny fahitako ny anarako dia marika fa tsy nisy izany voafafa manontolo izany ny mombamomba ny mpifidy ka niteraka ny ahiahiko hoe miala bala amin'ny tsy fahatomombanana ry zareo ao amin'ny CENI.
Fahaefatra farany, ny olana amiko tsy hoe voasoratra ao ny anarako dia mionona aho fa te-hanamarina aho hoe iza avy ny olona ao amin'ny trano ipetrahako ampy taona hifidy? Sao dia misy anaran'olona tsy fantatra ampidimpidirina ao nefa tsy ho hitako amin'ny fanamarihana sy fitadiavana ataoko izany. Raha tena te-hampihatra ny mangarahara ry zareo dia tokony ataony ihany koa izay ahafahana mijery ny iray fokontany mihitsy dia jeren'ny besinimaro ao hoe mihoatra ve ny mpifidy? sao mbola misy ny efa maty mbola misoratra anarana na ny efa nifindra monina (toy ny anaran'ny vadiko)? Raha mbola mifikitra hanatontosa fifidianana ao anatin'izay tsi-fahatomombanana izao dia efa karazana finiavana hangala-bato amiko ary mitady handany ny olona tiana apetraka hitondra na mety ho vitsy an'isa aza ny nifidy azy.
Jentilisa 16 aogositra 2011
Nampidirin'i jentilisa | 6 Hevitra | Trackback (0) | Permalink